Hlala kwisitudiyo samagcisa esikhethekileyo nesinesitayile
Zaczernie, Województwo podkarpackie, Poland
I-Sala752 sisitudiyo somculi esiphilayo / somsebenzi. Isitudiyo sinesicwangciso esivulekileyo kwaye sinegumbi elinye, malunga ne-50m2 iyonke. Idityaniswe ngaphakathi kwestudiyo ludonga lwekhitshi langoku oluxhotyiswe ngokupheleleyo kunye neekhabhathi zomthi ezibuyiselweyo. Ukongeza, kukho igumbi lokuhlambela elinesitayile kunye nokuhamba kwishawa kunye nebhonasi yokwenyani-umgangatho wokufudumeza ophantsi kunye negalari yesitayile sekhonkrithi. Isicwangciso esivulekileyo sibonelela ngokuguquguquka kunye neendlela ezahlukeneyo zokuseta - amalungiselelo okulala anokulungiswa ngokweemfuno zakho.
Ngaba wakha wacinga ngokuhlala kwistudiyo somculi? Lifikile ithuba.
Istudiyo yinjongo eyilwe ngokutsha ngabayili bezakhiwo abaphefumlelwe yimbali yesi sakhiwo sika-1922 kunye nabantu ababehlala kwaye basebenza apha. Esi sakhiwo sasiyivenkile eqhelekileyo kunye nekhaya kwizizukulwana ezibini zosapho lakwaSala. Ingaphakathi lihlaziywe ngovakalelo kunye neempawu zokuqala ezigciniweyo, kubandakanywa ipeyinti eludongeni ukusukela ngoo-1920.
Kukho igadi eluhlaza egcinwe kakuhle ngaphambili kunye nethafa elinetafile kunye nezitulo. Ibarbecue ibonelelwe ukuba uyonwabele.
Igumbi lokucwangcisa elivulekileyo, igumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawa yokuhamba. Indawo yokugcina kunye nempahla yokugcina impahla. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngodonga lwekhitshi lwamaplanga olujongene negumbi leplani elivulekileyo.
Ibhedi yesofa ye2
Ukulala okongeziweyo kwabantwana kunokucwangciswa
Itafile yokutyela ye6
5.0 ·Izimvo eziyi-22
5.0 · Izimvo eziyi-22
ISala752 ikwiZaczernie, ilali engaphandle nje kweRzeszow kuMazantsi-mpuma wePoland. Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane, iRzeszow yi-5km kude, kunye neenqwelomoya eziqhelekileyo ezisuka eStansted, eLuton, eBristol naseManchester. I-Krakow yimizuzu engama-90 yokuqhuba kunye neendlela ezininzi zokubhabha ukusuka eGatwick.